Al-Shabaab oo qersheyneysa duullaan diyaaradeed | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo qersheyneysa duullaan diyaaradeed
Hay'adaha amniga dalka Kenya ayaa maamullada xubnaha ka ah Dowladda ka codsay in ay soo gudbiyaan haddii ay xog yahaan ama isaga arkaan, Rashid Mwalimu, oo ay baadi goobayaan booliska la dagaalanka argagixisada.
NAIROBI, Kenya - Sida ku xusan qoraal ay heshay warbaahintu, Mwalimu oo hadda ku sugan Soomaaliya ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay xubin hubeysan oo ka mid ah Kooxda A-Shabaab.
Rashid Mwalimu, waxaa lagu sheegay inuu yahay duuliye tababaran, Kooxda Al-Shabaabna ay dooneyso in ay u adeegsato weerar diyaaradeed oo la mid ah kuwii 11 September 2001, laga qaaday daarihii ganacsiga ee Mareykanka.
Laamaha amaanka ee arinka Mwalimu, gacanta ku haya waxa ay rumeysan inuu isku dayi doono inuu dib ugu soo laabto gudaha dalka Kenya si uu fuliyo qorshaha uu xambaarsan yahay.
Baaritaan lagu sameeyay ku lug lahaan shihiisa Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu ogaaday inuu tababar ku qaatay dalka Filibiin isagoo uu wehliyo Cholo Abdi Abdulla, oo hada ku jira Xabsi.
Ilo wareedyo dhanka amaanka ah ayaa sheegaya in Cholo iyo Mwalimu ay saaxiibo dhow ahaayeen kuna biireen Al-Shabaab sanadkii 2015-kii.
Labadaan nin waxa ay saaxiibo dhow la ahaayeen ragiii qaaday weerarkii DusitD2, ee Salim Gichunge (Faruq) iyo Osman Gedi.
Cholo waxaa laga qabtay bishii July 2019 wadanka Filibiin halkaas oo uu ku baranayey duulimaadka diyaaradaha.
Sirdoonka Mareykanka ayaana rumeysan in Cholo uu qorsheynayay inuu afduubto diyaarad isla markaana uu fuliyo mid la mid ah weerarkii 9/11 ee Mareykanka.
Markii la qabtay saaxiibkiis Rashid Mwalimu, wuxuu dib ugu laabtay Soomaaliya, ayaa lagu yiri warbixinta.